သင့်စာဖတ်သူများအားသင်အားပေးပါသလား။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 20, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီညငါ Borders ထံမှအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Gather မှာပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်ကမင်းရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်ဆိုတာရေးခဲ့တယ်။
CopyBlogger မှ Brian Clark ထံမှမကြာသေးမီကရေးသားထားသော blog သည်ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ သငျသညျစကားမပြောနိုင်သော Make5သဒ္ဒါအမှားများ။ ဘရိုင်ယန်ကဒီ post ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကျော်ကတည်းကရေးခဲ့တာပါ။ ငါသဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းနှင့်အတူတသမတ်တည်းရုန်းကန်။
ပြိုင်ပွဲအကြောင်း ထူးခြားတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ကိုမင်းသိလား။ Borders and Gather သည်သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုကြားလို။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများအားဝေမျှနိုင်ပြီးဆရာများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ဆောင်သောအံ့ဖွယ်အလုပ်ကိုဆင်နွှဲနိုင်သည်။ ဒေါ်လာ ၅၀ နယ်ခြားလက်ဆောင်ကတ်ရရန် Borders သည်နောက်ဆုံးရွေးသူ ၄ ဦး ကိုရွေးကာကံကောင်းသူတစ် ဦး ကိုဒေါ်လာ ၂၅၀ Borders လက်ဆောင်ကဒ်ရရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
တစ်နေ့တာတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ရာနှင့်ပြီးမြောက်ခဲ့ရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အိမ်သို့အပြန်ခရီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအတွေးများကိုခေါင်းထဲစုဆောင်းကာကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ရေးရန်သူတို့ကိုစည်းရုံးလေ့ရှိသည်။ ငါတကယ်ထိုင်ဖို့အချိန်ကတည်းက, အကြောင်းအရာပေါက်ကွဲဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ငါ 'ဝိညာဏ်စီး' 'အတွက်ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။ ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်စာရိုက်လို့မရဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ဝါကျတွေနဲ့စာပိုဒ်တွေဟာအပြောင်းအလဲမြန်ပြီးပတ်ပတ်လည်မှာခုန်နေတတ်တယ်။
လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို, ငါအနည်းငယ်အမှားတွေထားခဲ့ပါ။ ငါပို့စ်ကိုမူကြမ်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းသည်။ ငါမူကြမ်းဖတ်ပါ။ ငါမူကြမ်းအထောက်အထား - ဖတ်ပါ။ ငါအမှားများကိုပြုပြင်နှင့်မူကြမ်းထပ်ခါတလဲလဲထုတ်ဝေ။ နောက်ဆုံးတော့ငါ post ကိုထုတ်ဝေ ... နောက်တဖန်သက်သေပြ။ ငါအရမ်းဂရုစိုက်ပေမဲ့ 'ငါ့ကိုစကားမပြောနိုင်အောင်' လုပ်မိတဲ့အမှားတွေထဲကတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်။
The Gather စီမံကိန်းကကျွန်တော့်ရဲ့ ၈ တန်းအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ဆရာမ Rae-Kelly အကြောင်းရေးဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ အကယ်၍ မင်းကစာကိုဖတ်ရန်တစ်မိနစ်၊ နှစ်အချိန်မယူလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝမသေချာ။ မိမိကိုလေးစားမှုရှိရန်အကြောင်းပြချက်ပေးရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်သည်။ ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်အရေးအသား၊ စာလုံးပေါင်းနဲ့သဒ္ဒါကိုအာရုံစိုက်မယ့်အစားမစ္စစ်ရာ - ကယ်လီကမကောင်းတာထက်မကောင်းတာကိုရှာဖို့ငါ့ရဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တယ်။ အပြုသဘောအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်, ငါမစ္စစ် Rae-Kelly များအတွက်ကြီးသောအလုပ်သင်ယူနှင့်ထုတ်လုပ်ချင်တယ်။ အတိတ်ကအမှားများအတွက်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထပ်မံမလုပ်မိရန်အားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မစ္စစ်ရာကယ်လီဟာသူမကျောင်းသားတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ၎င်းသည်ယနေ့နှင့်အသက်အရွယ်တွင်ဆရာများနှင့်ခေါင်းဆောင်များအတွက်ရှားပါးသည်။ ဘရိုင်ယန်က“ ငါ့ကိုစကားမပြောနိုင်အောင်” ရေးဖို့ဒီစာကိုမရေးခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်ငါတကယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ Blogging ကိုစဉ်းစားနေတဲ့ဒါမှမဟုတ် blogging လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုမင်းကိုငါမျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒီလိုဆောင်းပါးတွေကမင်းကိုစိတ်ဓာတ်မကျစေဘူး။
မှတ်စု: Brian ရဲ့ဘလော့ဂ် ပိုက်ကွန်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အရေးအသားတိုးတက်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုကိုများစွာကူးယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအပြုသဘောဆောင်သည့်ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာများအားစိတ်ဓာတ်ကျစေရန်ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုပါ။ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ငါဘလော့ဂါအားလုံးအတွက်စကားမပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အမှားတွေအတွက်မင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါ့မယ်။ မင်းငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် မင်းရဲ့အမှားတွေကိုရှာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ငါမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါမဖတ်ဘူး။ မင်းဆီကနေသင်ယူရတာဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့စာအရေးအသားကြောင့်ငါဖတ်နေတာ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်သည်“ စကားမပြောနိုင်သောသူဖြစ်ပါက” ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကိုဖြည့်ရန်အချိန်ယူမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ စာဖတ်သူတစ်ယောက်ကအကြံဥာဏ်အစားအကြံပေးချက်ကိုရေးတဲ့အခါငါအီးမေးလ်နဲ့သုံးကြိမ်ရှင်းပြခဲ့ရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းစွမ်းရည်များတိုးတက်လာသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ စာဖတ်သူအချို့အတွက်အမှားအယွင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုထိခိုက်စေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ အမှားမလုပ်မိစေဖို့သေသေချာချာစဉ်းစားပါ။
ကောင်းသောဆရာများကသူတို့ကျောင်းသားများကိုတည့်မတ်ပေးကြသည်။ သင်အစားထိုးနိုင်သည် ခေါင်းဆောင်၊ နည်းပြ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ မိဘသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါ ၏အရပျ၌ ဆရာမ အဲဒါအမှန်ပဲ။
မတ်လ 20, 2007 မှာ 7: 27 pm တွင်
ငါကအဲဒါကို“ ခက်ခဲတဲ့အချစ်” Doug လို့ချရေးမိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းတော့“ စကားမပြောနိုင်သော” ခေါင်းစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကဆွဲအားကိုတိုးမြှင့်ဖို့ပဲ။ ဒါကကျွန်တော်ရေးဖူးသမျှထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံး post ပါ။ တော်တော်ထိတ်လန့်စရာပါပဲ။
မတ်လ 20, 2007 မှာ 8: 01 pm တွင်
ငါဘယ်နှစ်ခါငါမပြောတတ်ဘူး rewrote ဒီ post ကအသံမကြားနိုင်အောင်ဒီ post! သင်၏ဘလော့ဂ်သည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများစွာရရှိသည်။ မင်းပြောတာကိုမင်းအဲဒီလိုမဆိုလိုဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါဟာ“ သဒ္ဒါနည်းကျစိန်ခေါ်မှု” လို့ခံစားရတယ်၊ 🙂
စိတ်ဓာတ်ကျမယ့်အစား၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကငါ့အတွက်အားရှိစရာဖြစ်တယ် (ငါကတခြားသူတွေအများကြီးသေချာတယ်) ။ 'စကားမပြောနိုင်သော' ဟူသောစကားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သွားခွင့်မပြုနိုင်
ကောင်းပြီ၊ မှတ်ချက်များစွာ (ကျွန်ုပ်မှာယူထားသည်) ကိုသတိပြုမိပြီးမှတ်ချက်ပေးသူအများစုသည်လုံးလုံးလျားလျားအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်! သင်၏ပို့စ်သည်ရှေးရှေးလူများစွာကိုကူညီလိမ့်မည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီသည်) ။ ဝေဖန်သုံးသပ်သူများသည်မည်သူ့ကိုမျှစာရေးခြင်းမှတားဆီးမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဟာမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူအလေ့အကျင့်များနှင့်သည်းခံခြင်းကြာ!
post ကိုထွက်စစ်ဆေးနေဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အားပေးမှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မတ်လ 21, 2007 မှာ 12: 27 AM
ငါထင်တာကတော့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုသတိပေးတဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ စကားမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ခက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လူတွေအာရုံစိုက်လာပုံရတယ်။ ၎င်းသည်သူ၏သွန်သင်ခြင်းနည်းလမ်းအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
မတ်လ 21, 2007 မှာ 6: 57 AM
ငါသဘောတူတယ်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောရာထူးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ချင်တော့, ငါကဒါကဲ့သို့သောပို့စ်များကိုရေးသားခြင်းမှရှေးရှေး "တားဆီး" ပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ် ကျနော့်အမြင်ကတော့ Brian ကိုရိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ (သူ့ဘလော့ဂ်ကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်) ကျနော့်ရည်မှန်းချက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အားပေးရမယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ဖို့ပဲ။
လူတွေစာမရေးနိုင်ရင်ဘလော့ဂ်ရေးတာကိုလူတွေရှောင်ချင်မှာသေချာတယ်။ ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းရဲ့အံ့ thing စရာကောင်းတဲ့အချက်ကလူတွေကသူတို့သိထားတဲ့အကြောင်းကိုရေးခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းများသည်ဤအမျိုးအစားတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မိဘအုပ်ထိန်းမှု၊ ယုံကြည်ခြင်းစသည်တို့ကိုမျှဝေသင့်သည်။
မတ်လ 21, 2007 မှာ 10: 17 AM
ငါခေါင်းစဉ်ရသောအခါငါစိတ်ထဲပျောက်ဆုံးနေခံစားရတယ်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာထည့်သွင်းဖို့ငါခေါင်းစဉ်ရောက်တဲ့အခါငါခံစားခဲ့ရသောအရာကိုအတိအကျဖော်ပြရန်။ ထိုအခါငါဘလော့ဂ်စာဖတ်သူကိုသဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းအများကြီးဂရုမစိုက်ပါဘူးထင်, အရေးကြီးသောကြောင့်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ 21, 2007 မှာ 1: 09 pm တွင်
သင်၏ဥပမာသည်အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်နိုင်သည် - ကျွန်ုပ်သည်အင်္ဂလိပ်စာကိုဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးပြုသောရှေးရှေးများကိုတောင်မစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါ။ အင်တာနက်တွင်ဘာသာစကားဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်များမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်ရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂါများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသင့်သည်။
မတ်လ 22, 2007 မှာ 12: 08 AM
အကြောင်းအရာကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုငါသဘောတူတယ်။ ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူတချို့ကစာရေးသူရေးသားတာကိုပဲစိတ် ၀ င်စားတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါတို့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသဘာဝကျကျရေးသားနိုင်ခြင်းဟာမင်းဟာစာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုအားဖြင့်, မှန်ကန်သောစာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါ။
ဇန်နဝါရီ 7, 2009 မှာ 5: 44 AM
သင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြောင့်အမှားများ * သင်စကားမပြောနိုင်သောလုပ်ပါစေ
ရှုပ်ထွေး (သင်၏အကြံဥာဏ်အကြံဥာဏ်အကြံပေး VS ကဲ့သို့)
သို့သော်လည်းငါသည်အစဉ်မပြတ်သောအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုလေ့ ... သော
ကျွန်ုပ်သည် not အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရသော်လည်း
ပေးဆပ်ပါ အကယ်၍ ၎င်းသည်အခမဲ့ပါဝင်လျှင် meh, grammar နှင့်